BBC Somali - Warar - Abwaan Warsame Shire oo la aasay
Abwaan Warsame Shire oo la aasay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 Oktoobar, 2012, 10:19 GMT 13:19 SGA
Warsame waxa uu ku dhiiri-gelin jiray dhallinyarada inay ku biiraan booliiska
Boqolaal qof ayaa ka qeybgalay aaska Abwaan Warsame Shire Cawaale oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Wararka Soomaaliya ka imaanaya ayaa sheegaya in dabley aan la aqoon ay toogteen oo ay dileen abwaanka Soomaaliyeed ee Warsame Shire Cawaale xilli uu gurigiisa u socday.
Warsame Shire, oo u shaqeeynayay Radio Kulmiye,waxa uu qoray isla markaana uu ka qeybqaatay ruwaayad looga soo horjeeday kooxda al-Shabaab, oo uu ku eedeeyay inay marin habaabinayaan dadka Soomaaliyeed iyaga oo isticmaalaya magaca Islaamka.
Sida ay sheegeen ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ, Warsame waxa ay hanjabaad uga imanaysay kooxo markii uu dhawaan ka hadlay dableyda dadka rayidka ah bartilmaameedsada.
Weriyayaashu waxa ay sheegayaan dilkiisa ay ka dhigan tahay in la aamusay cod ka soo horjeeday fikradaha al-Shabaab, kaasi oo caan ka ahaa bulshada dhexdeeda.